> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Video inay iPad aan Lugood
Ma jiraan hab lagu dhigay filimada on your iPad aan u dulqaadan on Lugood? Waan daawadaa filimada ku saabsan computer gaar ah, oo waxaan jeclaan lahaa inaan awoodi karaan inay u geliyey iPad oo aan u dulqaadan on my computer ugu weyn in aan iPad waxaa synced in. Ma isticmaali karaa Cyberduck ama barnaamij kale qaar ka mid ah si ay waxan u samaynaysaan? Hadii uu qof i siin kartaa socod gaaban iyada oo ka mid ah tallaabooyinka aan runtii u mahad lahaa!
Marka ay timaado in wareejinta video in iPad, Lugood malaha waa mid ka mid ah hore biligleynaya maskaxdaada. Saraaxa hadlayay, aad loo ogol yahay inuu sameeyo wax. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad iska cad in Lugood saari doonaa content hadda on your iPad hor syncing, gaar ahaan marka computer ma tahay mid ka mid ah in aad sida caadiga ah iPad u hagaagsan in. Xoqo madaxiinna oo ku saabsan?
Sida loo dhigay videos on iPad aan Lugood
Ha welwelin. Ma ahan adag tahay in la wareejiyo video in iPad aan Lugood. Waxaad gargaar ka qaar ka mid ah qalabka xisbiga 3aad ka heli kartaa. Ka mid ah, ka TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondershare (Mac) waa xaq halkan sugayo. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in files iyo qalab aad la tayo leh sameecadda wareejinta. Hadda, raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo nuqul video in iPad la qalab this. Riix badhanka hoose si aad u dejisan iyo rakibi qalab kombiyuutarka.
Tan iyo Mac shaqada version iyo daaqadaha version si la mid ah, halkan, waxaan kaliya isku day version Windows si la isugu dayo transfering video in iPad aan Lugood.
Tallaabada 1. Orod qalab
Orod MobileGo Wondershare iyo xiriiriyaan iPad in kombiyuutarka via cable USB ah. Qalabkani waxa uu iskaan doonaa iPad iyo tusto iPad ay suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Nuqul video in iPad aan Lugood
On galeeysid bidix waxaa ka mid ah isha. Riix Media . On line sare ee Murayaad saxda ah, waxaad ka arki kartaa Music , Movies , TV muujinaysaa> , Podcasts , Music Videos , Lugood U iyo Audiobook . Dooro nooca video ah, Halkan, ogolaanaysaa 'qaadan Movies sida tusaale.
By gujinaya Movies , waxaad ka heli suuqa kala maamulka filimka. Riix dar ama Guji saddexagalka hoos Add > dar Folder ama dar File . Suuqa kala file browser ayaa soo baxa. Dooro filimada ama filim folder aad rabto in lagu wareejiyo kombiyuutar si ay iPad. Riix Open loo wareejiyo aad iPad.
Haddii videos aad wareejinta ma taageersana by iPad, waxaad heli doontaa wada hadal pop-up ah. Waxay kuu weydiinayaa bal in aad rabto in aad si loogu badalo iyo wareejiyo video si aad iPad ama aan. Riix Haa . Markaas, qalab bilowday si loogu badalo iyo wareejiyo videos. Ayaa la gediyay videos leh qaab MP4 noqon doonaa. Marka suuqa kala iibsiga la dhammeeyo, videos noqon doontaa iPad.
Fiiro gaar ah: Haddii aad loogu badalo iyo dar videos in iPad aan Lugood adigoo isticmaalaya version Mac, video ee la gediyay noqon doonaa qaab M4V.
Iyadoo TunesGo Wondershare ah, wareejinta video in iPad aan Lugood noqon karaa mid aad u fudud. Sidaa darteed, waqtiga soo socda, haddii aad rabto in lagu wareejiyo video ama faylasha kale ka computer ama drive dibadda adag tahay in iPad, waxaad isku dayi kartaa qalab this. Waxaad ka heli doontaa waxa ay taasi noloshaada mobile badan haboon.